Soosaarayaasha & Alaabada Cubitainer - Warshad Cubitainer Shiinaha
Cubitainers-ka waxay ka samaysan yihiin polyetylen cufan hooseeya iyo xirmo la soo uruuriyay, waxay la yimaadaan sanduuq, weel, daboolka polypropylene cad.
Weelasha iyo sanduuqyada sidoo kale si gooni gooni ah ayaa loo iibiyaa, Warshadeenu waxay ku iibinaysaa cubitainers-ka Alibaba khadka tooska ah in ka badan 10 sano.
Kuweynayaashayagu waxay buuxiyaan shuruudaha FDA iyo dhammaan alaabta ceeriin ah taas oo ka dhigaysa xulasho weyn oo loogu talagalay kaydinta biyaha iyo fursado kale oo badan.
Adblue Jerry Weelka Weelka leh ee biiyaha leh
Nadiifinta gaaska dabada gawaarida, sheygan adblue Jerry Can Container wuxuu ka samaysan yahay polyetylen cufan hooseeya iyo xirmo la soo uruuriyay, waxay la imaanayaan sanduuq, weel, daboolka polypropylene cad.
Kunteenarada iyo sanduuqyada sidoo kale si gooni gooni ah ayaa loo iibiyaa.
Weelashayada adblue Jerry Can Containers ayaa buuxin kara shuruudaha FDA iyo dhamaan waxyaabaha ceyriinka ah taasoo ka dhigeysa iyaga xulasho weyn oo loogu talagalay keydinta biyaha iyo fursado kale oo badan.
Isku-darka 5 litir ultrasound gel cubitainer
Isku-darka 5 litir ultrasound gel cubitainer wuxuu ka sameysan yahay polyetylen cufan hooseeya iyo xirmo la soo uruuriyay, waxay la imaanayaan sanduuq, weel, daboolka polypropylene cad.
Kuleylkeenna 5 litir ee ultrasound-ka ah ee gel cubitainers waxay buuxinayaan shuruudaha FDA iyo dhammaan waxyaabaha ceyriinka ah taasoo ka dhigaysa iyaga xulasho weyn oo loogu talagalay keydinta biyaha iyo fursado kale oo badan.